नेपाली भान्साका भाइरस प्रतिरोधी खाना ! – Korea Pati
March 15, 2020 गुरुदत्त न्यौपानेLeaveaComment on नेपाली भान्साका भाइरस प्रतिरोधी खाना !
नारायण घिमिरे,डब्लुएचओले कोभेड-१९ को आक्रमण महामारीको दर्जा दिएपछि भाइरस प्रतिरोधी खाना र पेय बारे धेरै जनचासो बढेको छ। हालैको जनचासोको उत्तर तेती सहज छैन। जन स्तरमा उपलब्ध परिस्थिति र बिकल्प भित्रको समाधान के भन्ने सिधा उत्तर खोजेको छ। सङ्क्रमणका बेला शरीरलाई सुरक्षित राख्न खानाको हिलिङ्ग गुण, प्रतिरक्षा निर्माण गुण
र पोषण गुणको अन्ने-न्याश्रित सम्बन्ध रहने गर्छ। कतिपय अवस्थामा सहज प्रश्नको सहज उत्तर दिन नसकिने हुँदो रहेछ। जब दिइने उत्तरले अर्को प्रश्न जन्माउँछ वा जिज्ञासुमा दुबिधा थपी दिन्छ त्यो समाधान नभएर थप पिडाको थुप्रो बनिदिन्छ।आजको जन चासोको सबैभन्दा चोटिलो चुरो जिज्ञासा “मैले खाने दैनिक खान पानमा कस्तो कस्तो तरिका अपनाउन सक्दा यो नोबेल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बाट आफूलाई सकेसम्म सुरक्षित राख्न सक्छु” रहेको कसैमा छिपेको छैन। भाइरस सङ्क्रमणको सम्भावना कुन कुन खानाले कसरि घटाउन सक्ला भन्ने नै हो। खानपिन बारे बजारमा निकै धरै सल्लाहहरू र कथाहरू पढ्न पाइने गर्छ। ती खाद्य पदार्थहरू किन चुनिए वा तिनका वैज्ञानिक आधार के भन्ने खासै आधार दिने गरिदैन।
कोभेड-१९ वास्तवमै के हो र यसको नालीबेलीको पाण्डुलिपि संसार लाई आज सम्म उपलब्ध भई सकेको छैन। उक्त पाण्डुलिपि प्राप्त नहुँदा औषधि विज्ञ हरूलाई सबैभन्दा उत्तम लागेका औषधि र खाद्य विज्ञ हरूलाई सबैभन्दा अब्बल लागेका हिलिङ्ग फुड समेतमा शङ्का गरिनु पर्छ। आज भएको पनि त्यही हो। समस्याको प्रस्ट रुटकज वा चुरो कारण थाहा हुन नहुँदा राम बाण जस्तो समाधान आउने सम्भावना रहँदैन।तपाइले खाने खाना तपाइको शरीरलाई चाहिने इन्धन दिने, तन्तुहरूको निर्माण र मर्मत सम्भारको लागि जरुरी हुने बस्तु र तन्तु तथा अङ्गहरूलाई रोग लाग्न नदिन जरुरी प्रतिरक्षा प्रणाली बनाउन र रोग लागि सकेको अवस्थामा रोग सँग भिडेर तपाइको तन्तु र अङ्गको रक्षा गरी तपाइलाई जीवित राख्न जरुरी हुने पदार्थ तपाईँको शरीरलाई उपलब्ध गराउने बस्तु हो। आयुर्वेदिक र क्वान्टम बायोलोजीको हिसाबमा त यो शरीरमा प्राण धान्न जरुरी हुने जीवन्त शक्ति दिने उपाय समेत हो।
कोभेड-१९ जस्ता रोगको विरुद्ध लड्न हामीलाई खानामा भाइरस सँग लड्ने क्षमता बढाउन जरुरी छ। भाइरस विरुद्ध लड्ने क्षमता विकास गर्न एकातर्फ शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई स्थिर राख्न जरुरी हुने खानको सार तत्त्व रहनु जरुरी हुन्छ भने अर्को तर्फ भाइरस विरोधी सार तत्त्वहरुको मात्रा बढाउन अनिबार्य हुन्छ।कतिपय अवस्थामा खानामा भाइरस विरोधी तत्त्व रहदा पनि उक्त तत्त्व अन्य तत्त्वको अभावमा शरीरले लिने नसक्ने हुने गर्छ। तसर्थ ती सहायक तत्त्व समेत खानामा समावेश गर्न सक्दा खानालाई हामीले चाहेको जस्तो इमुन दिन सक्ने पोषण तत्त्वमा ढाल्न सम्भव हुन्छ। कतिपय अवस्थामा खानामा भाइरस विरोधी तत्त्व रहदा पनि उक्त तत्त्व अन्य तत्त्वको अभावमा शरीरले प्राप्त गर्न नसक्ने हुने गर्छ। तसर्थ सहायक तत्त्व समेत खानामा समावेश गर्न सक्दा खानालाई चाहेको जस्तो इमुन दिनसक्ने पोषण तत्त्वमा ढाल्न सम्भव बन्छ।
लसुन: शरीरमा भाइरस प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न एलिसिनको राम्रो भूमिका हुने गर्छ। एलिसिन अक्सिजनमा मिल्दा तुरुन्तै डाईएलाईल डाईसल्फ़ाईड र डाईएलाईल ट्राईसल्फ़ाईडमा परिवर्तन हुन्छ। जस्तै: आज बजारमा उपलब्ध हुने एन्टी-भाइरल दबाइ Allimed® or Allimax® (दुवै १००% शुद्ध) एलिसिन हो। जुन लसुनमा पाइन्छ। एलिसिन रुवा-खोकीको चिसो भाइरसको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। एलिसिनले भाइरस र ढुसीलाई मारी दिन्छ। लसुनलाई धेरै पिन्दा अक्सिजन सँग मिलेर टुक्रने हुँदा सग्लै लसुनको पोटि खान सक्दा यसको भाइरस प्रतिरोधी शक्ति धेरै उपयोग गर्न सकिन्छ। लसुनको भाइरस मार्ने खुबीले सिधै लसुन खादा हाम्रो आन्द्रामा समेत दर्द दिन सक्छ। तसर्थ लसुनको बलिष्ठ भाइरस प्रतिरोधी क्षमता काँचै वा पिनेर वा सुपहरूमा मिसाएर सेवन गर्न सकिन्छ। चप गरेको १ चिनी चम्चा (४-५ ग्राम) लसुन, १ टेबल चम्चा (१४ ग्राम) शुद्ध महमा (प्रशोधन नगरिएको काँचो) मिसाएर १ दाना ल्वाङ सँग २ वा ३ दिन सम्म दिनको एक पटक खाने र त्यस पछि एक वा दुई दिन बिराएर खाने गर्दा शरीरको भाइरस प्रतिरोधी क्षमता निकै धेरै बढेको पाइएको छ। तोरीको तेलमा ५४ प्रतिशत एलाईल आइसोथायो साइनेड हुने गर्छ। यसमा ५.५% डाई एलाईल डाई सल्फ़ाईड र ९.४% डाई एलाईल ट्राई-सल्फ़ाईड हुने गर्छ। परम्परागत रूपमा मसालमा अदुवा र लसुन रहने, भुटानमा तोरीको तेल खाने गर्दा हामीमा निकै राम्रो एन्टी भाइरल क्षमता बढेको देखिन्छ।
अदुवा: दश हजार भन्दा धेरै वैज्ञानिक अनुसन्धानले ताजा वा सुकाएर पाउडर बनाएको अदुवाको भाइरस प्रतिरोधी शक्ति हुने प्रमाणित भएको छ। एन्टीभाईरल गुण हुने सारतत्वहरू सेसकुईटरपिन, एलिसिन, एलिलिन, एजोईनिनको धेरै राम्रो श्रोत हो अदुवा। एन्टीभाईरल गुण दिने अदुवाका सारतत्वहरू प्रशोधन हुँदा अन्य केमिकल बन्ने हुँदा सकेसम्म कम प्रशोधन गरी चियामा खाने, मसलामा खाने, कलिलो अदुवाको रस खाने, अदुवाको डाँठको रस खाने चलन संसारभर व्यापक बनेको हो। अयुर्बेदले त काँचै अदुवा मुखमा हाली कुटु कुटु टोक्ने सल्लाह दिन्छ। अदुवाको यही गुनका कारण विगतमा एचओनएनओनको केशमा अदुवा प्रयोग गरी एचओनएनओन इन्फ़्लुएञ्जा-ए परास्त गरिएको थियो। एड्सको इमुन सिस्टम कमजोर हुने रोगीमा होस् वा मानिसको श्वास प्रश्वासमा बाधा दिने भाइरस परास्त गर्न अदुवाको सफल प्रयोगको अनुभव संसार सँग छ।भाइरस विरोधी ईमुन विकास गर्न अदुवा अत्यन्त उपयोगी छ। अदुवामा तामा, पोटासियम, म्याग्नेसियम प्रचुर मात्रामा हुने हुँदा ईमुन सिस्टम सन्तुलन गर्न, उच्च रक्त चाप रोक्न, पाचन शक्ति नाटकीय रूपमा बढाउन समेत सहयोगी हुन्छ। जुन भाइरल महामारी हुँदा शरीरलाई अनिबार्य हुने गर्छ।
बेसार वा हलेदो: भाइरस प्रतिरोधी खानाका भाइरस मार्न सक्ने वा भाइरस लाई तन्तुको कोशिका सम्म पुगी सङ्क्रमण गर्न रोक्न सक्ने वा शरीरमा जरुरत भन्दा धेरै एन्टीबडी पैदा हुने र नियन्त्रण गुम्न पुगेका कारण उत्पन्न अधिक पिडाका कारण मानिसको मृत्यु हुने अवस्था वाट जोगाउन सक्ने कुनै पनि गुण नितान्त महत्त्व पूर्ण हुने गर्छ। बेसारले भाइरसको प्रोटिन सँग टाँसिएर यसलाई निष्क्रिय पारि न त शरीर भित्र आक्रमण गर्न सक्ने , न टुक्रिएर सन्तान ब्रिद्दि नै गर्न सक्ने बनाएर निष्क्रिय पारिदिने भेटिएको छ। बेसारमा हुने देस-मिथोक्सी करकुमिन, बिसड़ी- मिथोक्सी करकुमिनको एन्टी-भाइरल, एन्टीकेन्सर र एन्टी बेक्टेरियल गुणको भेटिएको छ। त्यस्तै शरीरमा धेरै एन्टीबडी पैदा हुन गई शरीरमा उत्पन्न हुने अधिक पिडाका रोक्ने एन्टी इन्फ्लेमेटोरी गुण रहने गर्छ। तसर्थ खाना तथा पेय पदार्थमा प्रशस्त बेसार समावेश गरी खाने बानीले शरीरको भाइरस प्रतिरोधी गुण विकास गर्न सहयोगी हुने गर्छ।
strong>क्यान्सर प्रतिरोधी रेसवरेट्रोल अधिक हुने खाना: हामीले खाने कतिपय खानामा रेसवरेट्रोल (Resveratrol) नामक क्यान्सर प्रतिरोधी एन्टीअक्सिडेन्ट हुने गर्छ। शरीरमा यसको आपूर्ति गर्न सक्दा यसले मुटु र रक्त सञ्चार प्रणालीको रक्षा गर्ने, रगतमा कोल्डस्टेरोइड घटाउने, रगत जम्न नदिई हार्टऐटेक वाट बचाउन र रगतमा चिनीको मात्र घटाउन समेत महत्त्व पूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपाली बदाम, पिस्ता, अङ्गुर, रेड र व्हाईट वाइन, बेरी जातिका सबै फलफूल जस्तै स्ट्रबेरी, ब्लु बेरी, क्र्यांनबेरी, ऐसेलु, काफल आदि, कोका, आदिमा उच्च रेसवरेट्रोल हुने गर्छ। रेसवरेट्रोल फंगल सङ्क्रमण विरुद्ध लड्ने, अल्ट्राभोईलेट रेडिएसन, चिन्ता र चोटपटक लाग्दा समेत सो विरुद्ध लड्ने गर्छ। जुन कोरोना सङ्क्रमण विरुद्धको प्रति रक्षात्मक प्रणाली बलियो आधार बनाउन सहयोगी हुने गर्छ।
खानामा प्रसस्त एन्टी भाइरल हर्ब्सहरु संलग्न हुने गरि खाने: मानिसमा एन्टी भाइरल ईमुन ब्रिद्दि गर्ने हर्ब्सहरु धेरै छन्। जस्तै तुलसी, बाबरी, ओरिगानो, थाइम आदि। यिनीहरूलाई चिया जस्तो, तरकारीमा हालेर, सुपमा हालेर, पेय पदार्थमा या सलादको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै अदुवा, लसुन तुलसी , बाबरी आदि हालेर चिया बनाउन सकिन्छ। ओरिगानो, थाइम, यूकालिप्टस, स्टार अनीश आदिको तेल मिसाएर वासना लिने, खानामा हाली खाने, परफुमको रूपमा प्रयोग गर्ने आदि गर्न सकिन्छ।हाम्रो भान्सामा हुने टिमुर पनि अर्को उपयोगी मसला हो। यसको एन्टी ब्याक्टेरिया र भाइरल गुण हुने गर्छ। तर इन्फ़्लुएञ्जा – ए जस्तोमा यसको प्रभाव अलि कम देखिएको छ। यो अझै अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले र यहाँ प्रमाणित भएका मात्र समावेश गरिएकाले छुटै टिम्मुरको बारे नलेखिएको हो। अनुसन्धान वाट हाल सम्मको प्राप्त सूचना अनुरूप टिम्मुर लिने बानी निकै फाइदा जनक हुने बुझिएको छ।
अन्य जरुरि मिनिरल्स र भिटामिन: जिङ्क, सिलेनियम जस्ता मिनिरल शरीरमा एन्टी-भाइरल क्षमता विकास गर्न उपयोगी देखिएको छ। जुन अमेरिकी बदाम, फर्सीको गेडा, सूर्यमुखी फुलको गेडा, काजु, पिस्ता आदिमा प्रशस्त भेटिन्छ।(लेखक घिमिरे क्यानडा निवासी खाद्य तथा औषधि विज्ञ हुन)।
दक्षिण कोरियामा कोरोनाका कारण ७५ को मृत्‍यु, ८ हजार १ सय ६२ जना संक्रमित, कहाँ कती संक्रमित छन, यहाँ हेर्नुहोस्: